Vonetserana rendi yemaUS$ | Kwayedza
Vonetserana rendi yemaUS$
01 Nov, 2019 - 00:11	 2019-10-31T14:04:11+00:00 2019-11-01T00:00:41+00:00 0 Views
MUMWE murume akamhan’arira kudare mushandi wepachitoro paanorenda achiita basa rekugadzira mafoni mushure mekunge vanetsana nenyaya yekubhadhara rendi.
Mahulele Lemekani akaendesa Cathy Dzimumwe — uyo anoshanda pachitoro paanoitira basa rake — kuHarare Civil Court achida gwaro redziviriro.
Mutongi Nyasha Marufu akapa Lemekani gwaro rinomudzivirira.
“Mukadzi uyu nevaanoshandira varidzi vepashopu yandairenda ndichiita basa rangu rekugadzira mafoni. Panzvimbo iyi panobhadharwa zuva nezuva uye ndave nemwedzi gumi ndichipashandira,” anodaro Lemekani.
Anoti Dzimumwe anomubhadharisa rendi nemari yekunze yemaUS$. Asi, pasi pemutemo i
mhosva kuti munhu ange achibhadhariswa mari iyi muZimbabwe.
“Vanhu ava vakakwidza mari yerendi musi uno kuisa paUS$5 saka ndakanonoka kuchinja mari iya ndikati ndaizobhadhara mangwana acho tikawirirana. Akazouya naFrancis mumwe anoita zvekutsvaira ave kunetsera mari yavo mangwana acho ndisati ndachinja mari. Ndakavatsanangurira kuti ndozviripo Cathy akabva audza Francis kuti atore laptop yangu yebasa. Akaita zvekuibvuta laptop ikabva yakafa,” anodaro Lemekani.
Anoenderera mberi achiti, “Ndakazochinja mari ndikabhadhara uye ndakatora laptop yangu asi pandakaibatidza ndakaona isingashande. Ndakamumhan’arira kumapurisa akati anoigadzirisa.
“Pasina mazuva maviri, akauya ave kundishungurudza achiti ndinofanira kubva pashopu yavo nekuti handisi kubhadhra rendi. Anogara achizviita zvekubvuta midziyo yevanhu oregera kuidzosa kana kuti anoyiuraya. Manje akanyangira yaona nekuti ndakamumhan’arira, ndokusaka ave kundidzinga.”
Cathy anoudza dare kuti haana kumboshungurudza Lemekani.
“Handina kumbobvira ndamushungurudza. Ane chikwereti che475 Bond. Pashopu pedu tinokwanisa kupa munhu zuva rimwe renotisi (notice) nekuti panobhadharwa pazuva. Nyaya yelaptop ndoibvuma asi laptop yake takagadzira i’application’ imwe chete isiri kungoshanda,” anodaro.